Samachar Batika || News from Nepal » यी हुन् सबैभन्दा अभागी पुरुष, कहिल्यै खुसी र सुखी बन्न सक्दैनन् !
यी हुन् सबैभन्दा अभागी पुरुष, कहिल्यै खुसी र सुखी बन्न सक्दैनन् !
पोखरा । मानव जीवनमा भाग्यको निकै चर्चा हुने गर्छ । भाग्यमानीहरु सुख समृद्धि र खुसी जीवन बिताएका हुन्छन् । अ’भागी दुखले जीवनमा खुसी भन्ने कहिल्यै पाउँदैनन् । उनीहरुको जीवन चिन्ताले भरिएको हुन्छ । कुनै व्यक्ति जीवनमा कति भाग्यमानी छ भन्ने कुरा उसको परिस्थिती हेरेर बुझ्न सकिन्छ । शास्त्रमा केही कुराहरु भनिएका छन् । जुन कुराहरु भएका व्यक्तिलाई अ’भागी भनिएको छ ।
१. चाणक्य निति : यदि कुनै पुरुषको श्रीमतीको अ’न्त्य हुन्छ अर्कैसँग गइन् भने त्यो दु’र्भाग्य हो । तर यौ’नअवस्थामा नै जीवन साथीको साथ छुट्छ भने त्यो पुरुषले पुुुुन विवाह त गर्न सक्लान । तर उमेर ढल्केपछि विवाह होला यो जीन्दगीको सबैभन्दा दु’खद क्षण हो । पुरुषहरुलाई बुढेसकालसम्म पनि पत्नीको खाँचो हुन्छ । बुढेसकालमा एक्लो हुनु नि’रास र दि’क्दार जिन्दगी हुनु हो । त्यसकारण यस्तो पुरुषलाई अभागी पुरुष भनिएको हो ।
२.अरुको घरमा गुलाम : कुनै पुरुष व्यक्तिको लागि अरुको घरमा गुलामी बनेर बस्नु सबैभन्दा दु’खद कुरा हो । यस्तो व्यक्तिलाई अरुको काम गर्दा भनाइ सहनुपर्छ । अरुको घरमा बस्नु स्वतन्त्रता हुँदैन् । यस्तो व्यक्तिको तन मनले नै आफु अ’भागी रहेको महसुस गर्छ । त्यसकारण जो कोही पुरुष व्यक्तिले यस्तो कुराहरुबाट जागाउनु पर्छ ।
३.शत्रुको हातमा परेको धन : यदि कुनै पुरुष व्यक्तिको धन ख’राब व्यक्तिमा परेको छ भने त्यो व्यक्ति साच्चै अभागी हुन्छ । आफुले दुख क’ष्ट गरेर कमाएको धन अरुको हातमा पर्नु भनेको दु’र्भाग्य हो । त्यो धन कुनै बेला आफ्नै वि’रुद्धमा प्रयोग हुन पनि सक्छ ।
मानव जीवनमा भाग्यको निकै चर्चा हुने गर्छ । भाग्यमानीहरु सुख समृद्धि र खुसी जीवन बिताएका हुन्छन् । अ’भागी दुखले जीवनमा खुसी भन्ने कहिल्यै पाउँदैनन् । उनीहरुको जीवन चिन्ताले भरिएको हुन्छ । कुनै व्यक्ति जीवनमा कति भाग्यमानी छ भन्ने कुरा उसको परिस्थिती हेरेर बुझ्न सकिन्छ । शास्त्रमा केही कुराहरु भनिएका छन् । जुन कुराहरु भएका व्यक्तिलाई अ’भागी भनिएको छ । जुन हामाीले माथी जानकारी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०२:२७